प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिने ? वेबसाइटमा जानुस्, अनलाइन शुभकामना दिनुस् - Khabar Nepali
होमपेज / समाचार / प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिने ? वेबसाइटमा जानुस्, अनलाइन शुभकामना दिनुस्
प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिने ? वेबसाइटमा जानुस्, अनलाइन शुभकामना दिनुस्
शनिबार, मङि्सर १४, २०७६	, खबरनेपाली संवाददाता
प्रधानमन्त्री ओली बिरामी छन् । उनका शुभचिन्तकहरुमा स्वास्थ्यलाभको कामना दिने चाहना होला तर अस्पतालमा नै पुगेर स्वास्थ्य लाभको शुभकामना भनिराख्न व्यवहारिक रुपमा सजिलो काम होइन ।
यो समस्या समाधानको लागि उपाय सुरु गरिएको छ ।
एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गराएर चिकित्सकको निगरानीमा अस्पतालमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वेवसाइटबाटै स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिन सकिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई kpsharmaoli.com.np मा गएर स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिन मिल्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रेस सल्लाहकार थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्ने यो पहिलो प्रयोग हो । यसअघिका कुनैपनि प्रधानमन्त्रीको बिरामी भएको अवस्थामा स्वास्थ्यबारे वेवसाइटबाट स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिने व्यवस्था थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यही मङ्सिर १० गते मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरिएको थियो । हाल उहाँको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको अस्पतालले विभिन्न समयमा विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गएको प्रेस सल्लाहकार थापाले बताए ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत वेबसाइटमा शुभकामना दिनेहरुको शुभकामनाको निकै लामो सूचि बनिसकेको छ ।
तस्विर प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटको स्क्रिनसट गरिएको हो ।